အသားကင်တဲ | BadeBOTTI.CH - ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးနဲ့ဘာဘီကျူးများတဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသူများမှာ. ဘာကွောငျ့? Wir haben regelmässig Sammeltransporte und haben unsere Importkosten aus dem EU-Raum optimiert!
ကနေအရွယ်အစား625m2 မှ, အမျိုးမျိုးသောအတွင်းပိုင်း.
accessories များနေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်သည်အိပ်ပျော်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ပတ္တာ Bench ရရှိနိုင်ပါသည်.
အသားကင်အိမ်: Offene Bauweise mit grossen Fenstern
အသားကင် Hut တွင်: Massive Bauweise, တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးပြုရန်ကင်းကင်းရှင်းရှင်း
ချက်ပြုတ်သည်သို့မဟုတ်ပဲ chat '' မှမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူနေအိမ်များမီးလင်းဖို’ ရှိသည်.
(2,968 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
One thought on “အသားကင်တဲ”
BADEFASS ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden .. အာရဇ်ပင်ပူ tubs Clear ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်… (10,471)
ဥယျာဉ်ကိုပြုစု SAUNA သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌အဖြေသေးငယ်ကျန်းမာအိုအေစစ် .. စည်ပိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခွင့်ပြု… (5,609)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ tubs အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကမ်းလှမ်းမှုသည်။… (5,064)
သစ်သားရေပူကန် မြောက်ပိုင်းကနေဒါ NATURA ကနေသစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူဂန္ပူ tubs အဆိုပါဖြစ်ပါသည်… (4,984)
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးဧည့်သည်များတောင်းဆိုမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါပြီ. သင်ရှိသည်… (4,247)
စျေးနှုန်းစာရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစျေးနှုန်းစာရင်းပါဝင်သည်: hot tubs Pod ချွေးပေါင်းအိမ်တပ် ချ. ဥယျာဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် Huttengrill အိမ်သူအိမ်သားကင်တဲမီးဖို… (3,977)
Europa-line မဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးပြည့် .. ငါတို့၏ဥရောပလိုင်းအလိုလိုမြင်သည်အရာ. အရည်အသွေးမြင့်… (3,960)
သစ်သား WHIRLPOOL Classic နှင့်အချစ် - နည်းပညာနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း၏ရေချိုးအပျော်အပါးနှင့်ငြိမ်ဝပ်တွဲကိုစလှေတျ… (3,911)
လိပ်စာ Whirlpool ဗီဒီယို ယာဉ် ရေပူကန် Badefass ဘဲဥပုံ Badefass Doghouse ဒေါင်းလုပ် ဂျပန်ရေချိုး ဖင်လန် Sauna Pod စခန်းချ Sauna ThermoWood partner စျေးနှုန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဟာ feature ရှင်းလင်းရေး ချမ်းသာရေးသင်တန်း နမူနာပုံများ ညွှန်ကြားချက်များ ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ Dampfsauna ထင်းမီးဖို Harvia ဧဒုံ Ceadr Primo ကင်ရောင်းချသူ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေး WellnessBARREL USA သို့ Holzwanne တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ချမ်းသာရေးသင်တန်းသည်ဆိုင် ရေပူကန် Grillkabine ရေပူကန် Katalog Kiefer Badebottich စာတမ်းများ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ပြန်ကြား Sauna Kabine Dampfkabine မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေ WellnessFASS အဖြူအာရဇ်